Tinokutenda nokutora nguva uchiongorora bhurocha rino kuti udzidze pamusoro peZvapupu zvaJehovha, kudzidza nezvemabasa edu uye kuona zvinoitwa nesangano redu. Tinovimba kuti rakubatsira kutiziva sevaya vanoita kuda kwaJehovha mazuva ano. Tinokukurudzira kuti urambe uchiwana zivo yaMwari, uudze vamwe vemumhuri mako neshamwari zvauri kudzidza, uye ugare uchiwadzana nesu pamisangano yedu yechiKristu.—VaHebheru 10:23-25.
Uchaona kuti paunodzidza zvakawanda nezvaJehovha, unowedzerawo kuona kuti zvechokwadi anokuda zvakadini. Uchabva wakurudzirwa kuita zvose zvaunogona kuratidza kuti unomudawo. (1 Johani 4:8-10, 19) Asi ungaratidza sei kuti unoda Mwari nemararamiro aunoita? Nei kuteerera zvaanotaura maererano netsika kwakakunakira zvikuru? Uye chii chichakubatsira kuti ude kuita kuda kwaMwari pamwe chete nesu? Munhu anokudzidzisa Bhaibheri achafara kuongorora newe mhinduro dzichaita kuti iwe nemhuri yako mugone ‘kuramba muri murudo rwaMwari, muchifunga nezvoupenyu husingaperi.’—Judha 21.
Tinokukurudzira kuti urambe uchifambira mberi muchokwadi nokudzidza bhuku rinonzi “Rambai Muri Murudo rwaMwari.”